राष्ट्रियसभा : काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी तहबाट भइरहेको लापर्बाहीप्रति सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यायलयहरूसँग लापरवाही गर्ने ठेकेदारको नाम मागेको विषयलाई समर्थन गरेका छन् ।
आयुर्वेद चिकित्सक यादवविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीका निमित्त निर्देशक डा. रामदेव यादवविरुद्ध शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
एकता सफल हुने ओलीको दाबी
प्रधानमन्त्री एवं नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले एकता सफल हुने दाबी गरेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा शुक्रबार अवलोकनपछि सम्बोधन गर्दै ओलीले अब कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुटतिर नजाने र एकतालाई सफल बनाइने बताए ।
काठमाडौंका उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च : तोकेभन्दा १ सय ३६ प्रतिशत बढी
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा काठमाडौं जिल्लाका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा एक सय ३६ प्रतिशतसम्म बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
छ वर्षपछि कञ्चनजंघा हिमाल आरोहण
बिश्वको तेश्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर) को यो वर्ष सफल आरोहण भएको छ । बुधवार वेलुका पाँचजनाको टोलीले आरोहण गरेका हुन् । यो छ वर्षपछि भएको सफल आरोहण हो ।
यस वर्ष गणतन्त्र दिवस तीन दिन मनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रि-बजेट छलफल : एक तिहाइ सांसदमात्रै सहभागी
प्रदेशसभामा शुक्रबार जारी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पूर्वबजेट छलफलमा एकतिहाइ मात्रै सांसद उपस्थित भएका छन् । आफ्नो बोल्ने पालो सकिएलगत्तै प्रदेशसभा सदस्यहरु घर फर्किएकाले बैठक कक्षका कुर्सी खाली छन् ।
सिन्डिकेट हटाउन भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराई मन्त्रालय तानिए
यातायात मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई मन्त्रालय तानिएका छन् । उनलाई वैशाख ३१ गतेको यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो । भट्टराईले मन्त्रालयको काममा असहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । भट्टराई विभागमा २०७४ चैत २२ मा हाजिर भएका थिए ।
टुँडिखेलमा हुने गणतन्त्र दिवसको शैली फेर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा गरिने कार्यक्रमको शैलीलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
एकताको नाममा माओवादी केन्द्रको विलय : वैद्य
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले बाम एकता माओवादी केन्द्रको विलय भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ' जनयुद्ध' र संसद्‍वादविरुद्ध अघि बढेको र संघर्षबाट उदाएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा शक्ति विभाजित भएर एमालेमा विलय भएको बताए ।
दैनिक कामकाजलाई बाधा नहोस भनेर बिदा कटौतीः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकः सासंदले गराए राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदमा सत्तापक्ष नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरीयताक्रमअनुसार बसेको छ ।नेकपाको वरीयताक्रमअनुसार सत्तापक्षको सिटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्बरमा बसेका छन् ।
सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
फरक धारको राजनीतिबाट उदाएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बिहीबार एकीकरण भएको छ । अब दुई दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को एउटै ब्यानरमा जोडिएर शक्तिशाली दल बनेका छन् ।
‘स्थिरता र समृद्धिका लागि एकता’
नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि पार्टी एकता गरेको बताएका छन् । एकता घोषणालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै दुवै अध्यक्षले एकता तानाशाही दमनका लागि नभएको प्रस्ट पारे ।
कांग्रेस नेतृत्वलाई आग्रह : सत्ताकेन्द्रित राजनीति छाड्नुहोस्
कांग्रेस नेतृत्वले जनतालाई भन्दा सत्ता र पैसालाई केन्द्रीय भूमिकामा राखेका कारण निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीले पराजय भोगिसकेपछि नेतृत्वले युवा पुस्तालाई बाटो छाडिदिँदा नै कांग्रेसको भलो हुने बताए ।
‘विद्रोही’ ले बनाइदिए प्रहरी भवन
बाँफिकोट गाउँपालिका २, पीपलका ५८ वर्षीय धनबहादुर खत्री २०५३ जेठ १० देखि २०५४ असोज २ गतेसम्म कारागार बसे । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लागेपछि गाउँका अन्यसहित उनलाई पनि प्रहरीले पक्रेको थियो ।
गत साता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए, ‘पार्टी एकता हुने र नहुने ५०/५० प्रतिशत छ ।’ उनलाई आशंका थियो, एमालेमा माओवादी विलय गराउने प्रपञ्च हुन्छ कि ? एकता भइसकेपछि बहुमतको छडी लाग्छ कि ? जनयुद्धको इतिहासमा कालो बादल मडारिन्छ कि ? एकतामा विभिन्न शक्तिको चलखेल हुन्छ कि ?